विद्यालय खोल्ने नखोल्ने बारे एकाबिहानै यस्तो आयो निर्णय – Sandesh Press
विद्यालय खोल्ने नखोल्ने बारे एकाबिहानै यस्तो आयो निर्णय
August 2, 2021 237
काठमाडौं- साउन १ गतेबाट लामो दूरीमा सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने तयारी भएको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख अधिकारीहरूले दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका लामो दुरीका यातायात सेवा सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेका हुन् । कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहेकाले तत्काल विद्यालय भने सञ्चालन गर्न नदिने बताइएको छ ।उपत्यकाभित्र सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधन भने चल्न दिइरहेको छ। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा भोली सकिदैछ । ***अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
Prevमेष राशिलाई व्यापार, कर्कटलाई जागिर शुभ, कुन राशिले कुन काम गर्दा हुन्छ फलिफाप ?
Nextगोडा धुने बेला बेहुली डाको छोडेर रोइन, आफुमात्र नरोएर सबैलाई रुइवाइन (भिडियो हेर्नुस्)
सुस्मिताकी आमा रोईन् मञ्जुको कुराले, बुवाले बताए यस्तो,अचानक! आमाले रुँदै सुनाईन् ? (भिडियो सहित हेर्नुस )
भारत आइपुग्यो ओ’मिक्रोन भेरियन्ट, विज्ञहरु भन्छन्- हाम्रो लागि ख’तराको घन्टी बज्यो